नि’द्रा नलागे के गर्ने? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/नि’द्रा नलागे के गर्ने?
स्वस्थ तन र मनका लागि मीठो र गहिरो निद्रा अपरिहार्य मानिन्छ । पर्याप्त निदाइएन भनेडायबेटिज,डि’प्रेसनजस्ता रोग लाग्नुको साथै वजन बढ्ने समस्या देखापर्न सक्छ । त्यसैले मीठो निद्राका लागि यसो गर्नुहोस्।निद्रा नपर्नुको का’रण असुविधाजनक ओछ्यान पनि हुन सक्छ ।
असुविधाजनक ओछ्यानले श’रीर दुख्ने समस्या पनि सिर्जना गर्न सक्छ ।त्यसैले आफूलाई सहज हुने ओछ्यनमा सु’त्नुहोस्। बाल्यकालका घटनाहरू पनि सम्झन सक्नुहुन्छ । यसो गर्दा आफू स्वप्न दुनियाँमा सयर गरेजस्तो लाग्छ । जुन सुखद निद्राको कारक बन्न सक्छ ।निद्रा लाग्नका लागि तपाईंले आफ्नो विगतलाई सम्झन सक्नुहुन्छ ।
सुत्ने समय त्यस्ता पुराना दिनको याद गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंलाई रो’माञ्चित बनाउँछ ।निद्राका लागि कोठाको वातावरण शान्त रहन पनि जरुरी हुन्छ ।
त्यसका लागि तपाईंले बेडरुममा भएका सेलफोन, कम्प्युटर, ट्याब्लेड, टिभीका स्क्रिनबाट निस्कने लाइट बन्द गर्न सक्नुहुन्छ ।यदि तपाईंलाई सडकको हल्ला,
सवारीसाधनको आवाजले बाधा पुर्‍याउने गरेको छ भने यसको विकल्पबारे पनि सोच्न सक्नुहुन्छ । यस्ता स’मस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि सुत्ने समय आफूलाई मन पर्ने म्युजिक सुन्न सक्नुहुन्छ । जसले तपाईंलाई आराम प्रदान गर्नुका साथै निदाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
यदि प्रत्येक रात निद्राका लागि संघर्ष गर्न बाध्य हुनुहुन्छ भने ओछ्यान पुग्नुभन्दा पहिले चेरीको जुस पिउने गरेमा निद्रा लाग्न सक्छ ।
विभिन्न अ’नुसन्धानका अनुसार चेरीमा मेलाटोनिक तत्व हुन्छ, जसले मानिसलाई निदाउन मद्दत गर्छ ।कतिपयलाई विभिन्न एलर्जीका कार’ण पनि निद्रामा बाधा उत्पन्न गर्छ ।
कहिलेकाहीँ गर्मी वा अन्य वातावरणीय कारणले पनि निद्रा नलाग्न सक्छ ।यदि यस्तो हो भने कागती काटेर ओ’छ्यानको छेउमा राख्न सक्नुहुन्छ ।
यसो गर्दा कोठालाई सु’गन्धयुक्त बनाउनुका साथै स्वस्थ श्वासप्रश्वासका लागि पनि भूमिका खेल्छ । जसले आरामदायी निद्रा लाग्न सहयोग पुर्‍याउँछ । न्युज लय बाट।
ससुरा र देवर मिलेर मिलेर मेरो खुशी लु’टे भन्दै भक्कानिइन् बुहारी, सम्बन्ध थाहा पाउने डरले मेरा पतिलाई सि’ध्याए